केकी अधिकारीले नाजिरको नांगो छात्तीमा के लेखिन ? भिडियो « OsNepal News
केकी अधिकारीले नाजिरको नांगो छात्तीमा के लेखिन ? भिडियो
काठमाडौँ. केहि दिन अघि टिजर र ‘चिपक चिपक’ बोलको गीत सार्वजनिक गरेर चर्चामा रहेको चलचित्र ‘राज्जारानी’ को अफिसियल ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ। करिब ३ मिनेट ११ सेकेन्ड लामो ट्रेलरमा नजिर र केकीको प्रेम तथा टकरारलाई निकै रोमान्चक ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ। नाजिर र केकीले पहिलो पटक अन स्क्रिन रोमान्स गरेको चलचित्रमा तराईका युवा युवतीको प्रेम कथा र दाईजो प्रथाले एक युवतीको जीवनमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयलाई चित्रण गरेको छ। चलचित्रमा मधेशी लवजकै लागि भनेर धेरै दिन वोर्क सप पनि गरेको जानकारी केकीले दिएकी छिन् ।
यहि पौष २१ देखि मैथिली र नेपाली दुवै भाषामा देशभर एकैसाथ प्रदर्शन हुनेछ। चलचित्र मैथिली भाषा १० जिल्लामा प्रदर्शन हुने जानकारी निर्माण टिमले दिएको छ। यसका साथै चलचित्र भारतमा पनि प्रदर्शन हुने भएको छ । भोर कम्पनी प्रा.लीका सी.ई.ओ. राज कुमार महतोसंग रु २० लाखमा चलचित्रको संझौता केहि दिन अघिनै निर्माण टिमले जानकारी गराईसकेको छ ।
आर्यन फिल्मसको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्रको निर्देशन सफल लेखक यम थापा गरेका छन भने रमेश एमके पौडेल चलचित्रका प्रस्तुतकर्ता हुन्। चलचित्रमा नाजिर र केकी अधिकारीसंगै कामेश्वर चौरसिया , लक्ष्मी बर्देवा, संगीता नापित, अरुण रेग्मी, दीपक क्षेत्री, विनोद निरौला, अनोज पाण्डे, अशोक आचार्य लगायतको अभिनय छ । चलचित्रमा ताराप्रकाश लिम्बु र दीपक शर्माको संगीत, पुरुषोत्तम प्रधानको छायांकन, चन्दन दत्तको सम्पादन एवं विक्रम स्वारको नृत्य निर्देशन रहेको छ ।
‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’मा आइन् वर्षा राउत, भिडियो
काठमाडौं। नेपाल टेलिभिजनमा जितु नेपालले सञ्चालन गर्ने ुमुन्द्रेको कमेडी क्लबु हरेको सोमबार राति ९ बजे
नयाँ पप गीत ‘कालिको मन जाली ’मा अञ्जली अधिकारी र दुर्गेश थापाको रोमान्स हेर्नुहोस भिडियो
गायक केशव रयाप भुमिको स्वर रहेको गीत ‘कालीको मन जाली ’ पप गीतको भिडियो सार्वजनिक
ह्यान्डसम सागर तामाङको घर मोडेल करिश्मा पुग्दा यस्तो भयो
नेपाली लोक गीत संगीतको उत्थानको लागी निरन्तर क्रियाशिल चर्चित गायक राजु बिरही सापकोटा र प्रतिमा
नेपाली लोक संगीत क्षेत्रका लोक सम्राट भनेर चिनिने चर्चित गायक राजु परियार लामो समय पछि
बुद्ध लामाको आमा भन्छिन भाडामा बसेको धेरै भयो अब बुद्धले घर बनाउने भन्दै छ(भिडियो सहित)
जथाभावी हर्न बजाउने ९१ सवारीचालक कारबाहीमा
१६ वर्षीया शान्ति र धामीलाई लखेटी लखेटी आक्रमण गर्यो भालुले, शान्तीले यसरी बताइन् भालुले आक्रमण गर्दाको त्यो कहालीलाग्दो क्षण